दाँत किन खिइन्छ ? कारण र उपचार यस्तो छ - Internet Khabar
दाँत किन खिइन्छ ? कारण र उपचार यस्तो छ
October 29, 2017 Internet Khabar
कतियको समस्या हुन्छ, दाँतबाट रगन बग्ने। सास गन्हाउने। पाइरियाको कारण पनि यस्तो हुन्छ। दाँतको उचित रेखदेख नगरेमा पाइरियाको संभावना रहन्छ।
दाँतले खानेकुरा चपाउँछ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । दाँतको साइनो खानेकुरा चपाउनसँग मात्र छैन। यो शरीरको यस्तो अंग हो, जसले सौन्दर्यसँग पनि साइनो राख्छ।
सामान्यतया दाँतको राम्ररी सरसफाई तथा हेरचाह नगरेको अवस्थामा दाँतमा समस्या देखापर्छ।
पायरिया भएमा सासबाट दुर्गन्ध आउन थाल्छ। गिजा सुुनिन थाल्छ। दात कजोर भई हल्लिन थाल्छ। बढी तातो तथा चिसो पेय पदार्थको सेवनले दात सिरिङ्ग हुन थाल्छ। छुँदा समेत गिजा सुनिन थाल्छ। साथै दुई दाँतको बीच ग्याप रहन थाल्छ।
खाना पछि दैनिक दुई पटक ब्रस गर्न जरुरी छ । ब्रस गर्दा दाँतको राम्ररी सफाई गर्नु पर्छ। दाँत सफा गर्दा नरम ब्रसको प्रयोग गरौ। राती सुत्नु अगावै दातको राम्ररी सफाई गर्नु पर्छ। हरेक पटक खाना खाएपछि राम्ररी मुख कुला गर्नुपर्छ।
अन्यथा समयमै उपचार नगरेको खण्डमा पायरिका कारण दाँत तथा गिजामा संक्रमण भई दाँत र्झन थाल्छ।
पुरुषले थाहै नपाउने महिलाका ७ गोप्य कुराहरु
तनहुँमा तीन महीनामा चार महोत्सव हुने
काम छोडेर हड्ताल गरेको आरोपमा मलेसियामा तीन जना नेपाली पक्राउ
आज शेयर बजार पुनःओरालो